Tower Conquest 22.00.49g Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 22.00.49g လြန္ခဲ့ေသာ3လက
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Tower Conquest
Tower Conquest ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
နိစ္စထာဝရဘုန်းအသရေဘို့သင့်ရှာဖွေရေးအတွက်မျှော်စင် Conquest ၏လောကသို့စွ! ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်တာဝါတိုင်ဖျက်ဆီးဖို့ပြီးပြည့်စုံသောစစ်တပ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ။ အဆုံးမဲ့ကမ္ဘာ Explore နှင့်, ဘဏ္ဍာကိုဝင်ငွေသင်၏အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်လျက်, Player ကိုလိခ်လွှမ်းမိုးရန်သူများကိုနှိမ်နင်း!
● 70 ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်, သူရဲကောင်းများနှင့်တာဝါတိုင်များဖွဲ့စည်းငါးခုသီးခြားအုပ်စု။
ထုံးစံကာတွန်းနဲ့ 50 အဖွဲ့ခွဲတိကျတဲ့နောက်ခံကျော်●တက်ကြွ 2D အနုပညာစတိုင်လ်။
●ကြံ့ခိုင်နေ့စဉ် Quest များနှင့်ကုန်သည်ဟာယပူဇော်သက္ကာ။
●5ထူးခြားတဲ့ကစားသမား slot နှစ်ခုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောအဖွဲ့သည်တွေ့ရှိရန်ဇာတ်ကောင်ပေါင်းစပ်၏ 1000 ရဲ့ရောထွေးနှင့်ကိုက်ညီ!
Player ကိုတိုက်ခိုက်ရေး vs. Player ကိုစိန်ခေါ်အတွက် Facebook ကသူငယ်ချင်းများနှင့်စစ်တိုက်နှင့်အတူ●ဝေမျှမယ်လက်ဆောင်များ။
သငျသညျမျှော်စင် Conquest အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဖြင့်ကစားနိုင်ပါတယ်။
Tower Conquest အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Tower Conquest အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Tower Conquest အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Tower Conquest အား အခ်က္ျပပါ
my12345 စတိုး 887 1.09M
Tower Conquest ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Tower Conquest အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 22.00.49g
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.tango.me/privacy-policy/
App Name: Tower Conquest
File Size: 236.03MB
Release date: 2019-06-08 17:55:57
လက်မှတ် SHA1: 18:80:C4:E1:C6:3F:42:C5:63:BB:07:FB:B8:79:12:07:A8:2C:94:6E
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Tango
အဖွဲ့အစည်း (O): Sgiggle Inc.
Tower Conquest APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ